UQueen usafuna omunye umshado | Isolezwe
UQueen usafuna omunye umshado
Isolezwe / 20 June 2012, 11:42am /
UTHI kulahlwa mbeleko ngakufelwa njengoba esanda kuhlukana nomyeni wakhe akade esashade naye izinyanga ezinhlanu uSophie Ndaba njengoba ehi yena zisengawushaya nje okwesithathu
USAZIMISELE ngokushada okwesithathu umlingisi weGenerations uSophie Ndaba odume ngelikaQueen, osanda kuba sematheni ngokuphela komshado wakhe wezinyanga ezinhlanu nomyeni wakhe obengumbhishobhi uKeith Harrington.
Lo mlingisi uphumele obala ngokuthi ubengenakho ukuthokoza emshadweni wakhe nokuyikho okumenze wathatha isinqumo sokuthi ashiye phansi.
USophie uthe akulahlwa mbeleko ngakufelwa njengoba zisengawushaya okwesithathu kuye.
“Bengingajabule neze emshadweni wami. Ziningi izinto ezingenze ngaphuma emshadweni,” kusho uSophie.
Uthe ziningi izinto ahlangabezane nazo emshadweni wakhe ezimenze wakhula kakhulu nokuthe uma emazisa umyeni wakhe ukuthi useyamshiya bavumelana ngalokho.
“Ngikhule kakhulu manje futhi kuningi engikufunde emishadweni yami yomibili. Indaba yokuthi umyeni wami kukhona ukwesatshiswa obekukhona ngesibhamu kulokho ningabuza yena ukuthi ubenaso yini,” kusho yena. Ngaphambi kukaHarrington, uSophie owayeshade nomlingisi weZone 14, uThemba Ndaba.
USophie ugeqe amagula kwelinye lamaphephabhuku ngomshado wakhe, nalapho eveze khona ukuthi izinkinga zomshado zaqala besakwi-honeymoon. Kuleli bhuku udalule nokuthi wazila izinsuku ezingu-21 ngaphambi kokufinyelela esinqumweni sokuthi ehlukanise noHarrington, kwazise umshado wakhe ubusukhathaza nezingane zakhe ezintathu oLwandle (14), Rudo (22) noShallon (25).
Engxoxweni neSolezwe ukhuthaze abesifazane ukuthi bashade njengoba kuyinto emnandi kakhulu okumele uyiphathe ngazo zombili futhi kube nokuthembana kuyo.
“Mina bengiyinto umyeni wami afuna ngibe yiyo. Angikaze ngibe nobunye ubudlelwano ngesikhathi ngishade naye, yizinto nje ezincane ezenze umshado wethu waphela,” kusho yena.
Laba bashadikazi bahlukana nje kuqhamuke izindaba zokuthi bagqashule ifindo labo lomshado ngemuva kwezinkinga ezihlanganisa ukungabi neqiniso komyeni wakhe.
Kuthiwa bahlukana nje bekusanda kuputshuka izindaba zokuthi uHarrington ubenobunye ubudlelwano nabesifazane abathathu abahlukene futhi waqamba amanga ngeziqu zakhe zobufundisi.